Raysul Wasaare Cabdi Weli oo si kulul uga hadlay Weerarkii Alshabaab ku qaadeen Madaxtooyada – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Raysul wasaaraha Soomaaliya C/weli Sheekh Axmed ayaa Muqdisho ka jeediyey khudbad dheer, taasoo uu uga hadlay weerarkii Alshabaab 210kii bishaan ku qaadeen madaxtooyada iyo tilaabooyinka u qorsheysan.
Raysulwasaare C/weli ayaa khudbadda uu jeediyey ee warbaahinta marayey u qorneyd sidan:
Mar kale, waxaan tacsi u dirayaa ummadda Soomaaliyeed iyo eheladii ay ka geeriyoodeen marxuumintii ku dhintay falkii argagixisanimo oo ka dhacay Villa Soomaaliya maalintii Jimcaha ee 21-kii bishan, waxaan Eebbahay ugu baryayaa in uu jannadii geeyo marxuumiinta, samir iyo imaanna ka siiyo ehelkoodii. Ina lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun.
Ma ahan markii ugu horreysay ee ay argagixisadu la beegsadaan falal noocan ah shacabka Soomaaliyeed. Kooxahaan waxay banneysteen dhiigga dad aan waxba galabsan ayagoo marar badan xasuuqay carruur, arday, macalimiin, takhaatiir, aqoonyaanno, culumo, shaqaale, saraakiil dawladeed iyo dad kale oo wax ku ool ah.
4. Waxaa dhowaan baarlamaanka la horgeyn doonaa sharciyo lagu qaado dadka ku eedeysan falalka argagisxisanimada. Sharciyadaas waxay, sidoo kale, ciqaabi doonaan shakhsiyaadka kal-kaala argagixisada, cidkastoo ay yihiin.